March 2021 - Super Union
မနေ့က ကျဆုံးသွားတဲ့ ဆရာဝန်လေး ဒေါက်တာသီဟတင်ထွန်း နောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ ပြည်သူအားလုံးအတွက်သေ တမ်းစာ ( အရင်သွားနှင့်ခဲ့ရလို့ အားနာပါတယ်တဲ့လား အကိုရယ်…. ) “ကျွန်ုပ်၏သေ တမ်းစာ” အခြေအနေတွေကတော့ …
29/03/2021 By fella News
စဈသား ၄ယောကျနဲ့ ရဲတဈယောကျကိုပါ မရရအောငျ ခုတျသှားခဲ့တဲ့ အောငျပနျးက သူရဲကောငျး..ရဲ့ ရုပျကလပျကိုတောငျ ကွညျ့ခှငျ့မရသေးပါဘူး ကြ.ညျအစ.ဈနဲ့ပ.ဈတော့ သူမြားတှကေိုဆုတျခိုငျးပွီး သူက မဆ.ုတျဘဲ ရှကေ့ခ.ံပေးသှားတာတဲ့။ စဈသား ၄ယောကျနဲ့ ရဲတဈယောကျကိုပါ မရရအောငျ ခ.ုတျသှားခဲ့တဲ့ အောငျပနျးကအကို။ …
26/05/2021 By fella News
အမရေိကနျက တရုတျနဲ့အငွငျးပှားနတေဲ့ တာငျတရုတျပငျလယျပွငျထဲမှာ လကွေောငျးအငျအားကိုပါ တိုးခြဲ့လာခွငျး နောကျကှယျ အငွငျးပှားနတေဲ့ တောငျတရုတျပငျလယျထဲမှာ အမရေိကနျဘကျက ရကွေောငျးအပွငျ၊ လကွေောငျးအငျအားတှပေါ စခလြာနပွေီလို့ သုံးသပျသူတှကေဆိုပါတယျ။ အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးနဲ့ ကာကှယျရေးဝနျကွီးတှရေဲ့ အာရှဒသေခရီးစဉျအပွီးဖွဈလာတဲ့ တောငျတရုတျပငျလယျပွငျထဲ လကွေောငျးအငျအားတိုးလာတာဟာ တရုတျရဲ့ အငျအားခြဲ့ထှငျမှုကို …
တနေ့က အိမ်ရှေ့မှာအသုတ်လာရောင်းလို့ ဝယ်စားတော့ သူကမေးတယ် အကိုက ဝန်ထမ်းလားတဲ့ မဟုတ်ဘူး ဘာလို့လဲမေးတော့? အိမ်ရှေ့မှာအသုတ်လာရောင်းလို့ ဝယ်စားတော့ သူကမေးတယ် အကိုက ဝန်ထမ်းလားတဲ့ မဟုတ်ဘူး ဘာလို့လဲမေးတော့ အိမ်ရှေ့မှာအသုတ်လာရောင်းလို့ ဝယ်စားတော့ သူကမေးတယ် အကိုက ဝန်ထမ်းလားတဲ့ …
22/03/2021 By fella News
ယောက်ျားသားတွေနဲ့ရင်ဘောင်တန်းပြီ ကြောက်စိတ်ကိုဘေးချိတ်ကာ ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်နဲ့ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးများ
ယောက်ျားသားတွေနဲ့ရင်ဘောင်တန်းပြီ ကြောက်စိတ်ကိုဘေးချိတ်ကာ ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်နဲ့ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးများ ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေကပါ အိမ်ထဲမှာမနေဘဲ ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်နဲ့စွမ်းစွမ်းတမံပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ထက်မြတ်ရဲရင့်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော့ ယောက်ျားသားတွေနဲ့ရင်ဘောင်တန်းပြီး အမှန်တရားအတွက် လမ်းမပေါ်ထွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းလူငယ်တွေက တက်တက်ကြွကြွနဲ့ အားမာန်အပြည့်ရှိနေကြဆဲဖြစ်လို့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြုလုပ်နေကြတာတောင် မမောမပန်းဘဲရှိနေကြတာ …
ကျဆုံးသွားတဲ့ မောင်ခန့်ငြားဟိန်း၏ ဖခင် ( “သူ့ကို တံခါးသော့ခတ်ပြီး ပေးမသွားအောင် လုပ်လို့ရပေမယ့် နောင်တစ်ချိန်မှာ သူ့ကို အဲ့လိုလုပ်ရပ်တွေကြောင့် အဖေလို့ မသတ်မှတ်မှာ စိုးရိမ်လို့” ) ဗီဒီယိုဖိုင်
ကျဆုံးသွားတဲ့ မောင်ခန့်ငြားဟိန်း၏ ဖခင် ( “သူ့ကို တံခါးသော့ခတ်ပြီး ပေးမသွားအောင် လုပ်လို့ရပေမယ့် နောင်တစ်ချိန်မှာ သူ့ကို အဲ့လိုလုပ်ရပ်တွေကြောင့် အဖေလို့ မသတ်မှတ်မှာ စိုးရိမ်လို့” ) ဗီဒီယိုဖိုင် “သူ့ကို တံခါးသော့ခတ်ပြီး ပေးမသွားအောင် လုပ်လို့ရတယ်။ …
တော်လှန်ရေးကာလာမှာ ကျဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမ ယ့်လည်း အမျှဝေခွင့်မရဖြစ်နေတဲ့ လှိုင်သာယာ က သူရဲကောင်းရဲ့အဖြစ်ကို ပြောပြလာတဲ့ ပြည်သူ တစ်ဦး
တော်လှန်ရေးကာလာမှာ ကျဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမ ယ့်လည်း အမျှဝေခွင့်မရဖြစ်နေတဲ့ လှိုင်သာယာ က သူရဲကောင်းရဲ့အဖြစ်ကို ပြောပြလာတဲ့ ပြည်သူ တစ်ဦး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီး ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နေရာအနှံ့အပြားမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ ပြည်သူတွေ များပြားလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း …
G-Alpha ( သို့မဟုတ် ) သပိတ်မှာ အမြဲ အသက် ၈ နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ ကလေးမတစ်ယောက်အကြောင်း..( လှော်ကားက နေ YBS 21 စီးပြီးနေတိုင်းလာတာပါတဲ့ )
G-Alpha ( သို့မဟုတ် ) သပိတ်မှာ အမြဲ အသက် ၈ နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ ကလေးမတစ်ယောက်အကြောင်း..( လှော်ကားက နေ YBS 21 စီးပြီးနေတိုင်းလာတာပါတဲ့ ) သပိတ်မှာ အမြဲ အသက် ၈ …
ကျောင်းမှာ မော်နီတာ၊ဘောလုံးသင်းကပ္ပတိန်အဖြစ် ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သလို နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ အသက်စွန့်တိုက်ပွဲဝင် ဦးဆောင်ခဲ့ပြန်ပြီလားကွာ။ တစ်ဦးတည်းသောသားတဲ့လားဗျာ…မိဘတွေရင်ကျိုးပါပြီ…
ကျောင်းမှာ မော်နီတာ၊ဘောလုံးသင်းကပ္ပတိန်အဖြစ် ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သလို နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ အသက်စွန့်တိုက်ပွဲဝင် ဦးဆောင်ခဲ့ပြန်ပြီလားကွာ။ တစ်ဦးတည်းသောသားတဲ့လားဗျာ…မိဘတွေရင်ကျိုးပါပြီ… တစ်ဦးတည်းသောသားတဲ့လားဗျာ…မိဘတွေရင်ကျိုးပါပြီ… ခဗျားတို့သိပ်ရက်စက်တယ်ဗျာ..ပညာတတ်လူငယ်တစ်ယောက်ကိုလုပ်ရက်ကြတယ်… ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူးဗျာ..ပြည်မြို့သူတွေအစားခဗျားကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ.. bro ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်တာဝန်ကျေပါတယ်ဗျာ…အေးချမ်းစွာအနားယူပါတော့ bro သားငယ် အရှည်ကြီးရေ ကျောင်းမှာတုန်းက မော်နီတာ၊ဘောလုံးသင်းကပ္ပတိန်အဖြစ် ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သလို နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ အသက်စွန့်တိုက်ပွဲဝင် …
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တောင်ကိုရီးယား အစိုးရထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထွက်လာပြီ ( နွေဦးတော်လှန်ရေး အောင်မြင်ပါစေ )
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တောင်ကိုရီးယား အစိုးရထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထွက်လာပြီ ( နွေဦးတော်လှန်ရေး အောင်မြင်ပါစေ ) မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တောင်ကိုရီးယား အစိုးရထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထွက်လာပြီ ၁။ ကိုရီးယားအစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအတွက် ကြိုးပမ်းနေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသူ/နိုင်ငံသားများ၏ ထက်သန်သော ဆန္ဒများကို …
14/03/2021 By fella News